China fehin-kibo miverina miaraka amina orinasa mpanamboatra kitapo gilasy | Huanyi
Tady ambany fanaintainan'ny lohalika ambany neoprene tantera-drano mety tsara amin'ny kitapo gilasy fitsaboana rehetra
DESIGN MAIMAIM-POANA, FOMBA FOTOTRA FOTOTRA FOTOTRA FOTOTRA REHETRA
Ny kitapo gilasy dia vita amin'ny lamba tsy tantera-drano sy malefaka, satroka mahatohitra avo lenta misy fisokafana satroka lehibe mba hamenoana mora ny fametahana gilasy na ranomandry voatoto, ary ny famolavolana lamba mihorakoraka dia ahafahan'ny kitapo ranomandry mivoaka manodidina ny faritra amin'ny vatana.
Isika rehetra dia mijaly amin'ny tsy fahazoana aina na ratra indraindray amin'ny fiainantsika, hozatra marary, fanaintainana na maratra. Ary na dia tsy afaka misoroka azy rehetra aza izahay dia afaka manampy anao amin'ny laoniny mba hanananao malefaka bebe kokoa ary tsy hanaintaina intsony mandritra ny andronao. fonosana fitsaboana mampitony dia miaraka amin'ny tadiny azo ovaina sy mitovy habe amin'ny lehilahy sy vehivavy.
Ny fonosana neoprène sy ny tadiny elastika 2 dia manampy anao hitazona ny kitapo ranomandry mora foana, azonao ampiasaina izany amin'ny toerana rehetra sy manao zavatra hafa rehefa mampiditra hafanana na compresse mangatsiaka.
Misy lavaka ao anaty fonosana hitazonana ny fonosana ranomandry amin'ny toerany, azonao atao ny manorona azy amin'ny lamosinao ambany, soroka, kitrokely, lohalika miaraka amin'ny tadiny elastika ary faribolana matanjaka & tadivavarana hamehezana ny fonosana ranomandry hampiasana azy na aiza na aiza.
Fanamaivanana sy fitsaboana ara-pahasalamana: apetaho avy hatrany aorian'ny ratra hifehezana ny fivontosana sy ny fivontosan'ny sela malemy. Manome fanamaivanana ny fanaintainana eo noho eo, fitsaboana maharitra ary manampy amin'ny fitantanana ny fivontosan'ny hozatra sy ny mpiara-miteraka. fonosana mangatsiaka gel no fonosana mangatsiaka mety indrindra amin'ny ratra mahazatra ary ilaina amin'ny toerana maro, ao anatin'izany ny: trano, birao, fotodrafitrasa, toeram-piasana ary sekoly.
Previous: Paosin-dranomandry postpartum
Kitapo Gel mangatsiaka
Fonosana mangatsiaka mafana
Fonosana ranomandry miverina amin'ny aretin'andoha
Fonosana ranomandry ao ambadiky ny vozonao
Fonosana gilasy ho an'ny lamosina sy ny hatoka
Kitapo gilasy azo ampiasaina ho an'ny fitsaboana ara-batana
kitapo gilasy fitsaboana azo ampiasaina indray